Formatter | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Formatter. Show all posts
Freemake Video Converter Gold 4.1.5.0 + Subtitle Pack + Serial
ဒီ Converter ဆော့ဝဲလ်လေး ကိုတော့ အားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Convert လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ ကတော့ AVI,
MP4, WMV, MKV, 3GP, DVD, MP3, iPad, iPhone, PSP, Android phones. Video to MP3 တွေကို 1 ကလစ်
နဲ့တင် Rip burn DVD အဖြစ် ထုတ်လို့ ရတဲ့ အပြင် Formats လုပ်ပေးနိုင် တာတွေလည်း အများကြီး ပါဝင်တာကို
တွေ့ရမှာပါ ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ပြောရမယ် ဆိုရင် အများကြီး ပါဗျာ တစ်ကယ်လည်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲ
Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်ထဲမှာ Subtitle Pack + Serial Key လေးကို ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, October 14, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Converter, Formatter, Video-software
ZOTAC WinUSB Maker v1.1 Final (SEP 2014) (Eng)
ဒီကောင်လေး ကတော့ ISO ၀င်းဒိုး အခွေတွေကို USB ထဲ ထည့်ပြီး ၀င်းဒိုးတင်ချင်သူများ အတွက် အသုံးပြုရ
လွယ်ကူတဲ့ WinUSB Maker လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။၀င်းဒိုးအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Creare una flash drive per il boot di Windows non è mai stato così facile grazie alla nuova utility ZOTAC WinUSB Maker, basta selezionare la destinazione del bootel’utility fa il resto.
ZOTAC WinUSB Maker supporta i file sorgente di Windows Vista, 7, 8e8.1ei DVD , per il massimo della compatibilità con i sistemi operativi supportati dai mini-Pc ZBOX. Sono supportate le flash driveele SD card per il massimo della semplicità di installazione.
Compatibile UEFI (Windows 8 x64esuperiori)
Windows XP o superiore con .NET Framework 4.0 installato
Copia facilmente i file da directory o file ISO
Drag and drop di file sorgenteedestinazione
Operazioni semplici ed immediate
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 15, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Formatter, Window
Format Factory v3.3.5.0 Full
Format Factory ဆိုရင် မသိသူ မရှိသလောက်ကို နာမည်ကြီး ပါတယ်။ အခု အသစ် ထွက် လာလို့ ပြန်ပြီး
မသိသေးဘူး ဆိုရင်လည်း နည်းနည်း ပြောပြမယ်နော်။ အင်တာနက် ကနေ video တွေ သီချင်းတွေကို သူ
ငယ်ချင်း တို့က ဒေါင်းလိုက်ကြမယ် ဆိုပါစို့။ ဒေါင်းထားတဲ video တွေကို mobile ဖုန်း DVD Player တို့မှာ
ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ အခါ format မကိုက် တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Format မကိုက်ဘူး ဆိုတာက ဒေါင်း ထားတဲ့ video ရဲ့ Format က AVI တို့ RMVB စသဖြင့် ဖြစ်နေမယ်။
ကိုယ်က အဲ့ဒါကို ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ ပြန်ကြည့်တဲ့ အခါ Player က အလုပ် လုပ်တော့ပါဘူး။ Player
တိုင်းက Format အကုန်လုံးကို အလုပ် မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ အဆင်ပြေမယ့် Format ကို ပြောင်း
ဥပမာ။ ။ 3gp တို့ mp4 တို့ စသဖြင့် မိမိ ဖုန်းက support လုပ်ပေးမယ့် format ပြောင်းပေးမှ ကြည့်လို့
DVD Player မှာ ကြည့်ချင် ရင်လည်း ဒီလို ပါပဲ။ usb pendrive ကို dvd player မှာ ထိုးပြီး ကြည့် ရမယ်။
အဲ့ဒါဆိုရင် DVD တော်တော် များများကတော့ mpg နဲ့ vob ကို ထောက်ပံပေးပါတယ်။ mpeg1 နဲ့ mpeg
2 ကလည်း အတူ တူ ပါပဲ။ အဲ့ဒီ Format တွေကို ပြောင်းပေးမှ dvd player မှာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန်နဲ့
အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်း ယူနိုင် ပါတယ်။
Provides functions below:All to MP4 / 3GP/ MPG/ AVI/ WMV/ FLV/ SWF. All to MP3 /WMA /AMR /OGG /AAC /WAV. All to JPG/ BMP/ PNG/ TIF/ ICO/ GIF/ TGA.Rip DVD to video file , Rip Music CD to audio file. MP4 files support iPod/iPhone/PSP/BlackBerry format.Supports RMVB,Watermark, AV Mux.
Version 3.3.5.0 changes
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 07, 2014 No comments:
Format Factory Version 3.3.4.0 (Lastest Version For PC)
Format factory V3.3.4.0 လေးပါဗျာ ကျွန်တော်လည်း PC မှာ အခုမှ Update လုပ်ကြည့်မှ တွေ့
လို့ပါ သူကတော့ MP3-2-4-3GP အစ ရှိသော ဖိုင်များ ကူးပြောင်းခြင်း ၊Photo, CD , DVD အစ
ရှိသော ဖိုင်များကို ကူးပြောင်းဖို့ပါ....
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 52.455MB ပဲ ရှိပါတယ် လိုချင်သူများအောက်မှာဒေါင်းယူကြပါ။
From: Thiha Htike (Mobile နည်းပညာ) by Thiha Htike
Format Factory v3.3.4 Update (Full version)
ကဲ Format Factory ဆိုရင် မသိသူ မရှိလောက် အောင်ကို နာမည်ကြီး ပါတယ်။ အခု့တော့ update အ
သစ် ထွက်လာလို့ ပြန် မျှဝေ လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကဲကဲ မသိသေးဘူး ဆိုရင်လည်း နည်းနည်း ပြောပြ မယ်နော်။ အင်တာနက် ကနေ video တွေ သီချင်း
တွေကို သူငယ်ချင်း တို့က ဒေါင်းလိုက် ကြမယ် ဆိုပါစို့။
ဒေါင်းထားတဲ video တွေကို mobile ဖုန်း, DVD Player တို့မှာ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ အခါ format မတူလို့
မသုံးနိုင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ Format မကိုက်ဘူး ဆိုတာက ဒေါင်းထားတဲ့ video ရဲ့ Format က
AVI တို့ RMVB စသဖြင့် ဖြစ်နေမယ်။ ကိုယ်က အဲ့ဒါ ကို ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ ပြန်ကြည့် တဲ့ အခါ
Player က အလုပ် လုပ်တော့ဘူး။ Player တွေက Format အကုန်လုံးကို အလုပ် မလုပ်မနိူင်ဘူးလေ။
အဲ့ဒီတော့ အဆင်ပြေမယ့် Format ကို ပြောင်းပေး ရမယ်။ ဥပမာ 3gp တို့ mp4 တို့ စသဖြင့် မိမိဖုန်းက
support လုပ်ပေးမယ့် format ပြောင်းပေးမှ ကြည့်လို့ ရပါမယ်။ DVD Player မှာကြည့်ချင်ရင်လည်း ဒီ
လိုပါပဲ။ usb pendrive ကို dvd player မှာ ထိုးပြီး ကြည့်ရမယ်။ အဲ့ဒါ ဆိုရင် DVD တော်တော် များများ
ကတော့ mpg နဲ့ vob ကို ထောက်ပံ့ ပေးပါတယ်။ mpeg1 နဲ့ mpeg2ကလည်း အတူတူပါပဲ။
အဲ့ဒီ Format တွေကို ပြောင်းပေးမှ dvd player မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကြည့်လို့ ရမှာပါ။
နောက်တခု ကျနော် စမ်းဖူးတာ ကတော့ နိူင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာ စာတန်းထိုးပြီးကြည့်လို့ရ
မယ့် Format ကို ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
window 8 မှာတော့ setting တွေကို မြန်မာလို ကောင်းစွာကြည့်ရှု့လို့ ရပါတယ်။
All to MP4 / 3GP/ MPG/ AVI/ WMV/ FLV/ SWF. All to MP3 /WMA /AMR /OGG /AAC /WAV. All to JPG/ BMP/ PNG/ TIF/ ICO/ GIF/ TGA.Rip DVD to video file , Rip Music CD to audio file.
MP4 files support iPod/iPhone/PSP/BlackBerry format.Supports RMVB,Watermark, AV Mux.
ဒီဆိုဒ်ပေါ်မှာ တင်သမျှ ပိုစ့်တွေကို Facebook ကနေ ရယူ ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီမှာ like ပေး ခဲ့ပါနော်။
မန်ဘာဝင် ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့် အသစ် တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကို တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မန်ဘာ ၀င်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 27, 2014 No comments:
VSO Software Convert X to DVD v4.1.19.365 + Keygen (22Mb)
တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းရေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ NTSC to PAL တို့ကို Convert လုပ်
ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် Subtitle files တွေက အစခေါ်ယူ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
16:9 widescreen + 4:3 fullscreen တို့ အပြင် ISO output အဖြစ်လည်း ရပါတယ်။
avi, divx, wmv, mkv, xvid, vcd, vob စသည် တို့ကို DVD, video formats လုပ်ပေးနိုင်
တဲ့ All in one video conversion and burning software ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ 22Mb ပဲရှိပါတယ်။ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
Create menus with videos and music - Preview window - Add chapters - automatic or custom - Subtitle files supported - Convert NTSC to PAL and vice-versa - Merge function - like for CD1 + CD2 Advanced features:
Converter multi processor -2pass encoding - Multiple encoding profiles - Video/Audio/Subtitle synchronisation - Various audio output formats - Image resize filters (lanczos, linear, cubic, etc . . .) - Multi-core processor optimized - Audio amplifier - Padding and cropping - De-interlacing - Batch converter Output settings:
Convert and burn avi to dvd and such videos to DVDvideo standard format (vob files) to guarantee compatibility with all home DVD players.
Useablank DVD or double layer DVD and the VSO burning engine included in ConvertXtoDVD will take care of the rest for you.
You get quality burning results especially when using quality disks like with the brands: Verbatim, Taiyo Yuden or Sony.
Compatible with any disks - ISO output available - NTSC + PAL region formats - 16:9 widescreen + 4:3 fullscreen
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 26, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Converter, Formatter
FormatFactory 3.3.2.0 Final (All In One Converter)
Format Factory ကိုတော့ လူတိုင်း သိကြမှာပါ။ All in One Converter လို့တောင်ပြောလို့
ရပါတယ်ဗျာ။ အခု Version အသစ်ထွက် လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Audio, Video, Picture နဲ့ CD/DVD, ISO စတာတွေ အားလုံးကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါ
တယ်ဗျာ။ CD/DVD , ISO တွေကိုလည်း Burn ပေးနိုင်ပါတယ်။ Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့
File Type တွေ ကလည်း အများကြီးပါဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်။
Computer တစ်လုံးမှာရှိထားသင့်တဲ့ Converter တစ်မျိုးပါ။
Improve “High quality” profiles of audio , now supports auto-calc equal bitrate
“All to MKV” supports inside srt subtitle
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 19, 2014 No comments:
Fomat Factory 3.3.1 latest update (For PC)
Format factory အကြောင်း ကိုတော့ ထွေထွေ ထူးထူး ပြောမနေ တော့ ပါဘူး။
နောက်ဆုံးထွက် လေးပါ။ version က 3.3.1
file size က 33 MB ပါ။
အသုံးပြု လိုသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, January 29, 2014 1 comment:
It provides everything you need, it is fast. It’s about twice as fast as UNetbootin, Universal USB Installer or Windows7USB download tool, on the creation ofaWindows7USB installation drive from an ISO. It is also marginally faster on the creation of Linux bootable USB from ISOs.
Download Rufus v1.4.1
ကဏ္ဍ Flash-Software, Formatter
Format Factory ဆိုရင် လူတိုင်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ လူတွေ အတွက် ကျွန်တော် နည်းနည်း
ရှင်းပြပါ့မယ်။ Format Factory ကို video ဖိုင်ကနေ audio ဖိုင်ပြောင်းတာတို့ video ဖိုင်၊ audio ဖိုင်၊ image
ဖိုင် တွေရဲ့ file extension တွေပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲကို ဘာကြောင့် လူကြိုက် များရတာလဲ ဆိုရင်တော့ သူဟာ အသုံးပြုရ တာလွယ်ကူပြီး အလုပ်လုပ်တာ
နောက်ပြီးသူဟာ free ပေးတဲ့ software ဖြစ်တာကြောင့် crack လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
လိုချင်တဲ့လူများ အောက်ပါ လင့်မှာ သွားရောက် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Internet for Myanmar by Mandalay Thar
MAGIX Music Maker 2014 Premium 20.0.4.49 full version free Download
MAGIX Music Maker 2014 Premium 20.0.4.49 With Crack and serial license key patch full version free Download | 413 Mb.
သီချင်းဝါသနာပါသူများ အတွက် Music Maker 2014 Premium လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုလိုက်ပါနော်။
MAGIX Music Maker 2014 Premium High quality may be the ideal begin on the planet associated with songs manufacturing. Merely mix loops, include facilities results as well as report your personal words as well as devices. MAGIX Music Maker 2014 Premium 20.0.4.49 is really user-friendly that you will change your opinions in to expert sound monitors very quickly whatsoever.
Main Features of MAGIX Music Maker 2014 Premium 20.0.4.49
In addition resources Vita permit you to easily as well as rapidly produce your personal music. By using their very own information, for example performing, the actual billed power from the unique acoustic guitar licks as well as computer keyboard tunesaperson help to make your own tunes unforgettable. MAGIX Music Maker 2014 Premium 20.0.4.49 1 click on from the computer mouse, you are able to add your own tunes in order to SoundCloud, Youtube . com or even Myspace Leading.
Asawhole,alot more than 6, 000 seems as well as loops associated with various styles: Rock and roll Take, Technology Home, Rap, Chillout, 90s Eurodance as well as Electrical Jazz
MAGIX Music Maker 2014 Key Benefits
Rock and roll Percussion: Large percussion within top quality
Chain Outfit: First-class stringed music devices
Vita two: Much more functions along withabrand-new seems
important FOREX Phaser: Catchy facilities results
Brand new research: Immediate research loops, examples as well as documents
Much more monitors: Produce tasks along with as much as 99 monitors
MAGIX Music Maker 2014 Premium 20.0.4.49 Foreign trade Tasks: Capability to manage tasks MAGIX Songs Producer 2014 MAGIX Samplitude Songs Facilities
Style as well as visual spend: Along with enhanced use of music storage containers
Easy to customize eye-port: The actual user interface could be personalized based on person choices
Enhanced overall performance: Songs Producer right now functions much more steady as well as quicker!
ကဏ္ဍ Formatter, Music Manager
Format အစုံကို ပြောင်းနိုင်တဲ့ Xilisoft Video Converter Ultimate 7.7.3.20131014 Full
PSP, PS3, iPod, iPhone, Apple TV, Xbox, Ponsel Google, Ipad, iPad2 တို့ အတွက် စုံလင်လှတဲ့
media format မျိုးစုံကို covert လုပ်နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကောင်းလေးပါ တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ
တစ်ခုတည်းနဲ့ အားလုံးအိုကေတယ် အခု ပိုမြန်လာတယ်ဗျ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 25, 2013 No comments:
မြန်မာစာ ထည့်သွင်း လာသည့် formart factory
format factory ဆိုရင် လူတိုင်း သိမှာ ပါနော်.....မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ ဖိုင်တွေ အမျိုးမျိုး ကို formart တွေ ပြောင်း
ပေးလို့ ရတဲ့ ဆောဖ်ဝဲလ်လေးပါ။
ဒီနေ့ ထွက်လာတဲ့ version လေး မှာတော့ မြန်မာလို ပါလာတာကို တွေ့ ရတယ်ဗျာ .....
ဘာပဲပြောပြော မိခင် ဘာသာ စကား ကို သုံးဆွဲ ရမယ်ဆိုတော့လုံးဝ လန်းတယ်ဗျာ။
မြန်မာလို အသုံးပြချင်သူတွေ အတွက်ကတော့language မှာ မြန်မာ ဘာသာကို ရွေးချယ်ပေး လိုက်ရင်
setting တစ်ခုလုံးကို မြန်မာလို မြင်ရပါပြီ။
OS အားလုံးမှာ အသုံးပြု့ လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်မှာ screenshoot လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, November 12, 2013 No comments:
Quick Format နဲ့ Regular Format ကွာခြားပုံ
ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တဲ့ အခါမှာFormat အတွက် ရွှေးချယ်ရတဲ့ Quick နှင့် Regular ဆိုပြီး
ရှိပါတယ်။ Quick နှင့် တင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ် မယ် Regular နဲ့ တင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကို သိပြီး
တင်တာနဲ့ ဒီအတိုင်း တင်နေတာ ထပ်စားရင် အဓိပ္ပာယ် ပိုရှိမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို တင်ပြ ပေးလိုက်
ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တဲ့ အခါမှာ အောက်ပါ အတိုင်းတွေ့ ရပါတယ်။ တစ်ချိူ့ Windows တွေမှာ
FAT File System မပါရှိတော့ပါဘူး NTFS File System ကိုဘဲ ပါပါတော့တယ်။
နောက်ပြီး no Changes လဲ ပါမလာတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အရေး မကြီးပါဘူး။ Quick Format
နှင့် Regular Format ကို နားလည်ဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။
NTFS နှင့် FAT အကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Quick Format နဲ့ တင်တဲ့ အခါမှာ Windows တင်တဲ့ အပိုင်းက Disk ထဲက File တွေ
ကို ဖယ်ရှား (Remove) ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Drive ရဲ့ bad Sectors တွေကို Scans မလုပ်ပေးပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် Bad Sectors ရှိရဲ့သာနဲ့ bad Sectors ကို Scan မလုပ်ဘဲကောင်း တဲ့ နေရာမှာဘဲ
တင်သွားခဲ့မည်ဆိုလျင် Drive က မပျက်စီးဘူးလို့ ထင်ပြီး Quick Format ဘဲ ရွေးချယ်သင့်သလား။
ကိုယ်တိုင်း စဉ်းစားပါ။ ဒါကြောင့် Quick Format က Windows တင်တာ မြန်ပေမဲ့ bad Sectors တွေကို Scan မလုပ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိမိ Drive မှာ Bad Sectors ရှိရဲ့သားနဲ့ မစစ်ဆေးဘဲ Quick
Format နဲ့ဘဲ တင်နေမယ်ဆိုရင် Hard Disk က ရေရှည်ခံနိုင်ရည် ရှိမရှိ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Disk Error ရှောင်းရှား နိုင်သလာ ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားပါ။
Regular Format လို့တော့ မပြပါဘူး။ Quick လို့ မပြတဲ့ အပိုင်းက Regular လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Regular Format ကတော့ Files Permanently ကို ဖျက်ပေး ရုံတင် မက bad Sectors တွေကို ပါ
Scan လုပ်ပေးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Quick Format ထပ်စားရင် Drive မှာ Disk Error တွေ
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, August 16, 20132comments:
ကဏ္ဍ Formatter, နည်းပညာဆောင်းပါး
USB Memory Card တွေ Format ချမရရင် (Lexar USB Formatting Tool 2013)
တော်ရုံတန်ရုံ Format ချမရတဲ့ Stick, Memory Card တွေကို အကောင်းဆုံး Format ချပေးနိုင်ပါတယ်..
တစ်ခု အသိပေးချင်တာက လုံးဝ Format ချလို့ မရတော့ရင် Stick ရဲ့ Hardware လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Lexar® provides the performance and reliability needed to get the most from your digital device. Whether shooting photos, capturing video, watching_movies onatablet, or simply transferring and sharing files on the go. Sometimes you haveaproblem with Lexar USB flash drive formatting, writable, etc. please use Lexar USB format tool 2013.Insert Lexar USB flash drive in your computer USB post. Open Lexar USB format tool-2013 and choose your Lexar USB flash drive then press format .Wait until updating Lexar flash drive firmware.
Program Version: v 2013
OS Support: Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, mac
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, August 11, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Formatter, Memory, Tools